”Iiraan waa jilacsan tahay halista noogu darani waa Turkiga” – Sirdoonka Israel oo diiradda ku haya Turkiga | Hadalsame Media
Shirkad Kenyan ah oo ay fadeexad culusi ku qabsatay dalka Rwanda…
Home Arrimaha Caalamka ”Iiraan waa jilacsan tahay halista noogu darani waa Turkiga” – Sirdoonka Israel...
”Iiraan waa jilacsan tahay halista noogu darani waa Turkiga” – Sirdoonka Israel oo diiradda ku haya Turkiga
(Tel Aviv) 25 Agoosto 2020 – Israel oo beri dhowayd heshiis rasmi ah balse durba dulduleel ka muuqdo la yeelatay dalka Imaaraadka, ayaa sheegtay in halista ugu wayn ee ay wajahayaan sanadaha soo socda uu yahay dalka Turkiga, si xitaa ka badan Iiraan, sida lagu qoray Jerusalem Post.
Waxay sheegeen in taliska Ankara ee uu hadda hoggaamiyo MW Recep Tayyip Erdogan uu 10-kii sanadood ee ugu dambeeyey cadaawad u muujinayey Isarel, iyagoo barbardhigaya ”Nazi-gii Jarmanka”, isla markaana sheegaya inuu ballan qaaday xoraynta magaalada Quddus iyo Masjidka Al AQSAA.
Xogtan Sirdoon oo ka kala timid dhanka Sirdoonka caadiga ah iyo Millateriga Yuhuudda, ayaa si cad u sheegaysa in Israel ay hadda kaddib Ankara u arki doonto halis qaran iyo caqabad jirta.
Maqaal dhowaan lagu daabacay The Times ayaa sheegaya in Madaxa Mossad ee Yossi Cohen uu sheegay inuu sanado badan “la hadlayey saaxiibbo Khaliiji ah” oo aanu carrabaabin, markaasoo ay ka wada hadlayeen halista Iiraan, jeer ay halis kale hoostooda kasoo baxday.
“Awoodda Iiraan waa mid jilicsan, balse halista dhabta ihi waa Turkey,’” ayuu ku yiri madaxda Sirdoonka Masar, Sucuudiga iyo Imaaraadka.
Israel ayaa yoolalka istaraatijiga ah ee Ankara u aragta caqabad iyada haysata. Bishii Jannaayo qiimayn ay sameeyeen Ciidamada Xoogga IDF waxay sheegeen in Turkigu uu markii 1-aad noqonayo “caqabad qaran” taasoo ah arrin uu sanadihii dambe diiradda saarayey sirdoonka Israel.
Turkey iyo Israel ayaa mar isku fiicnaa, iyadoo ay Israel dayuuradaha daroonka mar ka iibin jirtey Turkey min 2005 ilaa 2010 kahor intaanu xiriirku xumaanin oo aanu qandaraaskaasi baabi’in, iyada oo ay Ankara hadda samaysato qaar ka mid ah daroonnada ugu casrisan caalamka.
Israel ayaan caadiyan ogolayn inay aragto dal Muslim ah oo iyada ka madax bannaan oo awood iyo farsamo yeesha, iyada oo dalal badan ku burburisey awoodda Maraykanka sida Ciraaq oo ay sheegtay inuu haysto hubka nukliyeerka, sida uu Nettanyahu ka hor sheegay Golaha Guud ee QM kahor weerarkii 2003-dii.
Previous articleImaaraadka & Israel oo durba kala boodey (Shir lasii qorsheeyey oo baaqday & cashar istaraatiji ah oo uu Imaaraadku bartay)
Next article”Kenya iyada oo Kashiinto ku fadhida ayay rabtaa inay Libaax listo!” – Shacabka Kenya oo amaan kala dul dhacay Somalia aadna ugu kacsan dowladooda (Arag jawaabaha)
Shirkad Kenyan ah oo ay fadeexad culusi ku qabsatay dalka Rwanda + Sawirro
(Kigali) 16 Jan 2021 - Sharikad Kenyan ah ayaa dhexda ka taagan fadeexad ka dhalatay abuur aan sax ahayn oo la siiyey beeraleey reer...